ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များအရေး ကုလသမဂ္ဂ ကူညီမည် | ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များအရေး ကုလသမဂ္ဂ ကူညီမည်
ကျော်ခ| June 13, 2012 | Hits:7,124
| | ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ရှောင်တိမ်းခဲ့ရသည့် ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး တဦးကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များ အရေးကို မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဘီဂျေ နမ်ဘီယာက ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မြန်မာအစိုးရက အရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသော နယ်မြေများအနက် စစ်တွေနှင့် မောင် တော မြို့များသို့ မစ္စတာ နမ်ဘီယာ ရောက်ရှိလာပြီး ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက် က ဒုက္ခသည်များကို လာရောက် တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းသို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုလို အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒီလူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အကြောက် တရားတွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကိုလည်း ကုစားရမယ်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်းပဲ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ပံ့ပိုးပူညီသွားမယ်လို့ မစ္စတာ နမ်ဘီယာ က ပြောသွားပါတယ်” ဟု အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးမဏိသာရ က ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
မစ္စတာ နမ်ဘီယာနှင့်အတူ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး နှင့် အစိုးရ အရာရှိ တချို့ လိုက်ပါလာခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေများကို မေးမြန်း၍ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒုက္ခသည်များ ကလည်း ပြောသည်။
ထိုခရီးစဉ်အတွင်း အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင်တချို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန်ရှိပြီး မောင်တောမြို့ အခြေစိုက် မြန်မာမွတ်စလင် အိုလမာ အဖွဲ့ချုပ် က ခေါင်းဆောင်တချို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန် ဆက်သွယ်ထားကြောင်း မောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ အစ္စလမ် ဘာသာ ဝင် များနှင့် စုဖွဲ့ထားသော အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(NDPD) ဗဟို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်ကျော် က ပြော ပြသည်။
“အဓိက ကတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့လူတွေကို ဘယ်လိုနေရာ ပြန်ချပေးမလဲ။ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတွေ တင်ပြ ဆွေးနွေးကြဖို့ပေါ့”ဟု ဦးခင်ကျော် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မစ္စတာ နမ်ဘီယာသည် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုးရန် ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့များဖြင့် စုဖွဲ့ထားသော Peace Donor Support Group နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ် စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် မောင်တောနှင့် စစ်တွေမြို့များသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလ ၈ ရက်နေ့က မောင်တောမြို့ပေါ်တွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၁၀၀၀ ကျော်က မြို့ပေါ်ရှိ လူနည်းစုဖြစ်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တို့၏ အိမ်များကို မီးရှို့ခြင်း အသက်ဆုံးပါးသည်အထိ လက်ရောက် ကျူးလွန်ခြင်းများမှ စတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်တွေမြို့ အပါအဝင် အခြားမြို့များသို့ပါ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရပ်များ ကူးစက်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မောင်တောနှင့် စစ်တွေမြို့များရှိ နေအိမ်နှင့် အဆောက်အအုံများ မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့၍ အနည်းဆုံး ရခိုင် ဒုက္ခသည် ဦးရေ ၁၇၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အစိုးရက စီစဉ်ပေးထားသော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ခိုလှုံနေကြ ရသည်။
NDPD ပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ ပြောဆိုချက် အရ ဘင်္ဂါလီများဘက်တွင်လည်း သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုများ ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော ဒုက္ခသည်များရှိကြောင်း သို့သော်လည်း စာရင်း အတိအကျ ပြုစုထားခြင်းမရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသော စာရင်းများအရ မောင်တောမြို့တွင် ရခိုင်လူမျိုး ၇ ဦး သေဆုံးပြီး စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်လူမျိုး၂၁ ဦးသေဆုံးကာ ဘင်္ဂါလီ ၆ ဦးသေဆုံးကြောင်း သိရသည်။ ဆေးရုံနှင့် အလှမ်းဝေးသော ရပ်ကွက် ကျေးရွာများတွင်လည်း သေဆုံးမှုများရှိကြောင်း ကြားသိရသော်လည်း အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း စစ်တွေဆေးရုံကြီးက ပြောသည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှစ၍ အုံကြွမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ယနေ့ညနေပိုင်းအထိ တည်ငြိမ်မှုရှိနေကြောင်း၊ ၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအထိ မြို့ပေါ်နှင့် မြို့ပြင်ဘက်ရှိ ကျေးရွာနှင့် ရပ်ကွက်များတွင် ဘင်္ဂါလီများက ၎င်းတို့အိမ်များအပါအဝင် ရခိုင် လူမျိုးများနေထိုင်ရာ အိမ်များကိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြောင်း ယင်းမြို့ပေါ်ရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်များက ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း များနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ဘင်္ဂါလီများက သေနတ်၊ ဂျင်ကလိ၊ ဓား၊ ဓာတ်ဆီပုလင်းနှင့် ခဲများကိုအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ဗလီများထဲမှတဆင့် အစိုးရလုံခြုံ ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသကဲ့သို့ အစိုးရ စစ်သားတစ်ဦး သေ နတ် ဒဏ်ရာနှင့် စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် တင်ထားရကြောင်း စစ်တွေရောက် သတင်းထောက် များက ပြောသည်။
မြို့ပေါ်ရှိရခိုင်များကလည်း ဘင်္ဂါလီများ အလုံးအရင်ဖြင့် ဝင်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြပြီး ကာကွယ်ရန်အတွက် ဝါးချွန်၊ တုတ်နှင့် ဓား များကို ကိုင်ဆောင်၍ ကင်းစောင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တုတ်၊ ဓား လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ လူ ၅ ဦးထက် စုဝေး သွားလာခြင်း မပြုရန်၊ တွေ့ရှိပါက ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဟု မြို့အနှံ့ လိုက်လံကြေညာ ခဲ့ပြီးနောက် လက်နက် ကိုင်ဆောင်ခြင်းများ မတွေ့ရှိရတော့ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီနေ့တော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ လက်နက်တွေကိုင်ဆောင်တာ မတွေ့ရဘူး။ ကုလားတွေကိုလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး”ဟု ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ဆိုသည်။ အစိုးရက လုံခြုံရေးယူထားပေးမှုမှာ အင်အားနည်းနေသေးသဖြင့် ဒေသခံ ရခိုင် လူမျိုးများက စိုးရိမ်နေဆဲဖြစ်သဖြင့် အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်နေကြကြောင်း ပြောဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံ ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ ရခိုင်အမျိုးသား တဦးက “ကုလားတွေက ညီတယ်။ လာရင် အုပ်စုလိုက်လာတာ၊ ဓာတ်ဆီ ပုလင်းတွေ မီးရှို့ပြီး ရခိုင်တွေအိမ်တွေပေါ် ပစ်တင်တာ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ရရာလက်နက်နဲ့စောင့်နေတာ ညလည်း မအိပ်နိုင်ဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည် ၈၅၀၀ ကျော်ကို စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း ၃၄ ခုတွင် ထားရှိပြီး မောင်တောမြို့တွင်လည်း ဒုက္ခသည် ၅၀၀၀ ကျော်ကို မြို့ခံဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် အစိုးရ အဆောက်အဦးများတွင် ထားရှိသည်။ ထိုဒုက္ခသည်များကို မြို့ခံလူမှု ကူညီ ရေး အသင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များက လှူဒါန်းပေးလျက်ရှိပြီး ယနေ့တွင် မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇ်ာဇော်၊ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး နှင့် ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းတို့က လာရောက်လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Ma Oo June 13, 2012 - 9:26 pm	ပြည်သူတွေ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံမှုရှိစေရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိုဖိဖိစီးစီးဆောင် ရွက်ပေးရင်တော်ပါပြီ။သို့ မဟုတ်ငါ့အသက်ကိုသတ်လို့ ငါလဲပြန်သတ်မယ်ဆိုပြီးမပြီးနိုင်တဲ့ မှုခင်းတွေ ကြားမှာအစိုးရသိက္ခာကျမယ်။
Reply	Hla Myo June 14, 2012 - 2:35 am	There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. These rohingya s in Myanmar are real Bangladesh muslims. Bangladesh muslims invaded and insult Myanmar. They are liars .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step .
( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. They are liars . There isastatement that Rohingya is not Myanmar ethnic in Myanmar Constitution. If so, Rohingya and World can’t colonize Rakhine state and Myanmar.
World Rohingya , Saudi Arabia Government and Other Muslim country governments and World muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) and VOA and World media who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders protest them.
Reply	စံမောင် June 14, 2012 - 6:01 am	ရခိုင်မင်းသာေးတွဘယ်ရောက်နေလဲ။သေသွားကြပြီးလား။ရခိုင်ပြည်ကထမင်းတွေ
Reply	san June 15, 2012 - 1:27 pm	လ၀က ကသစ္စာဖောက်လို့ လူမျိုးခြားတွေ မြန်မာပြည်ကိုဝါးမြိုနေဘီ။ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ လ၀က ၀န်ထမ်းအသစ်တွေကို လိုလေသေးမရှိပန့်ပိုးပြီး ပြန်ကြီးကြပ်စေချင်ပါသည်။ လ၀ကကြောင့်မြန်မာပြည်ကြီး ကမ္ဘာကပျောက်သွားမှာကြောက်လှပါသည်။